मुखभित्र घाउ आयो यस्तो छ सामाधानको उपाय ! – Upahar Khabar
मुखभित्र घाउ आयो यस्तो छ सामाधानको उपाय !
प्रकाशित मिति : १७ पुष २०७६, बिहीबार ०९:४९ January 2, 2020
मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठलगायतका मुखको कुनादेखि लिएर कहिले काहीँ गालाको छेउसम्म देखिने साना बिबिरा, मसिना सेता खालका फोकाफोकीले सताइरहेको पाइन्छ । यी घाउले खाना खान अप्ठ्यारो पार्नुका साथ साथै बोल्नै नहुनेगरी दुःख पनि दिन सक्छ । कहिले आफैँ वा दाँतले मुखमा भएको कुनै मासुको भागलाई तोकेर सानु र एक वा एकभन्दा बढी घाउ बन्ने गर्छ ।
घाउ हटाउने उपाय स्सुर्ती–पानमसला, अत्यधिक रक्सी तथा चुरोटको सेवन गर्ने, ब्याक्टेरिया तथा फङ्गसको संक्रमण, बढी तातो खानेकुराले मुखभित्र र वरपर घाउ आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । मुखमा घाउ आउदा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, हरियो सागपात तथा फलफूलहरू मजाले चपाएर खाने, धेरै तातो, चिल्लो खाने कुरा नखाने, चुरोट, रक्सी तथा सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढा रहनु पर्छ ।
मनतातो पानीमा फिटकिरी मिसाएर दिनमा ३ पटक कुल्ला गर्ने वा फिटकिरी घाउमै लगाउदा पनि केही हदसम्म राहत मिल्ने गर्छ । घाउमा मह लपक्क लगाउनाले, निमको पात वा जीरा चपाउने गर्दा पनि निकै आराम मिल्ने गर्छ । यौनरोग, मुखको क्यान्सर वा कुनै संक्रमणको कारणले पनि मुखमा घाउ आउन सक्ने हुँदा घरेलु उपचार अपनाउदा पनि एक महिना सम्ममा घाउहरू निको नभएको खण्डमा डाक्टरकोमा जानु आवश्यक हुन्छ ।
यस्ताे छ खुम्बु क्षेत्रकाे विशेषता र घुम्ने ठाउँ विवरण सहित
उच्च हिमाली भेगमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित